၁။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ တစ်ခုသောတရားကို ပယ်ကြကုန်လော့၊ သင်တို့ အနာဂါမ်ဖြစ်ရေးအတွက် ငါဘုရားတာဝန်ယူ၏။ တစ်ခုသောတရားဟူသည် အဘယ်နည်း? ရဟန်းတို့ တပ်မက်မှု ‘လောဘ’ဟူသောတစ်ခုသောတရားကို ပယ်ကြကုန်လော့၊ သင်တို့ အနာဂါမ်ဖြစ်ရေးအတွက် ငါဘုရား တာဝန်ယူ၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”အကြင်လောဘဖြင့် တပ်မက်သူ သတ္တဝါတို့သည် မကောင်းသော လားရာ ‘ဂတိ’သို့ လားရောက်ကြရကုန်၏။ ထိုလောဘကို ကောင်းစွာသိ၍ (ခန္ဓာငါးပါးတို့ကို) အနိစ္စစသော အခြင်းအရာတို့ဖြင့် ရှုသူတို့သည် (ထိုလောဘကို) ပယ်စွန့်ကုန်၏။ (ယင်းလောဘကို) ပယ်စွန့်သောကြောင့် ဤလောကသို့ တစ်ရံတစ်ခါမျှ မလာရောက်ကုန်”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၂။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ တစ်ခုသောတရားကို ပယ်ကြကုန်လော့၊ သင်တို့ အနာဂါမ်ဖြစ်ရေးအတွက် ငါဘုရားတာဝန်ယူ၏။ တစ်ခုသောတရားဟူသည် အဘယ်နည်း? ရဟန်းတို့ ပြစ်မှားမှု ‘ဒေါသ’ဟူသောတစ်ခုသောတရားကို ပယ်ကြကုန်လော့၊ သင်တို့ အနာဂါမ်ဖြစ်ရေးအတွက် ငါဘုရား တာဝန်ယူ၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”အကြင်ဒေါသဖြင့် ဖျက်ဆီးခံရသူ သတ္တဝါတို့သည် မကောင်းသော လားရာ ‘ဂတိ’သို့ လားရောက်ကြရကုန်၏။ ထိုဒေါသကို ကောင်းစွာသိ၍ (ခန္ဓာငါးပါးတို့ကို) အနိစ္စ စသော အခြင်းအရာတို့ဖြင့် ရှုသူတို့သည် (ထိုဒေါသကို) ပယ်စွန့်ကုန်၏။ (ယင်းဒေါသကို) ပယ်စွန့်သောကြောင့် ဤလောကသို့ တစ်ရံတစ်ခါမျှ မလာရောက်ကုန်”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၃။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ တစ်ခုသောတရားကို ပယ်ကြကုန်လော့၊ သင်တို့ အနာဂါမ်ဖြစ်ရေးအတွက် ငါဘုရားတာဝန်ယူ၏။ တစ်ခုသောတရားဟူသည် အဘယ်နည်း? ရဟန်းတို့ တွေဝေမှု ‘မောဟ’ဟူသောတစ်ခုသောတရားကို ပယ်ကြကုန်လော့၊ သင်တို့ အနာဂါမ်ဖြစ်ရေးအတွက် ငါဘုရား တာဝန်ယူ၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”အကြင်မောဟဖြင့် တွေဝေသူ သတ္တဝါတို့သည် မကောင်းသော လားရာ ‘ဂတိ’သို့ လားရောက်ကြရကုန်၏။ ထိုမောဟကို ကောင်းစွာသိ၍ (ခန္ဓာငါးပါးတို့ကို) အနိစ္စစသော အခြင်းအရာတို့ဖြင့် ရှုသူတို့သည် (ထိုမောဟကို) ပယ်စွန့်ကုန်၏။ (ယင်းမောဟကို) ပယ်စွန့်သောကြောင့် ဤလောကသို့ တစ်ရံတစ်ခါမျှ မလာရောက်ကုန်”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၄။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ တစ်ခုသောတရားကို ပယ်ကြကုန်လော့၊ သင်တို့ အနာဂါမ်ဖြစ်ရေးအတွက် ငါဘုရားတာဝန်ယူ၏။ တစ်ခုသောတရားဟူသည် အဘယ်နည်း? ရဟန်းတို့ အမျက်ထွက်မှု ‘ကောဓ’ဟူသောတစ်ခုသောတရားကို ပယ်ကြကုန်လော့၊ သင်တို့ အနာဂါမ်ဖြစ်ရေးအတွက် ငါဘုရား တာဝန်ယူ၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို – ”အကြင် ကောဓတရားဖြင့် အမျက်ထွက်သူ သတ္တဝါတို့သည် မကောင်းသော လားရာ’ဂတိ’သို့ လားရောက်ကြရကုန်၏။ ထိုကောဓကို ကောင်းစွာသိ၍ (ခန္ဓာ ငါးပါးတို့ကို) အနိစ္စစသော အခြင်းအရာတို့ဖြင့် ရှုသူတို့သည် (ထိုကောဓကို) ပယ် စွန့်ကုန်၏။ (ယင်းကောဓကို) ပယ်စွန့်သောကြောင့် ဤလောကသို့ တစ်ရံတစ်ခါမျှ မလာရောက်ကုန်”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၅။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-ဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”အကြင်မက္ခတရားဖြင့် သူ့ကျေးဇူးကို ချေဖျက်သော သတ္တဝါတို့သည် မကောင်းသော လားရာ’ဂတိ’သို့ လားရောက်ကြရကုန်၏။ ထိုမက္ခကို ကောင်းစွာသိ၍ (ခန္ဓာငါးပါးတို့ကို) အနိစ္စစသော အခြင်းအရာတို့ဖြင့် ရှုသူတို့သည် (ထိုမက္ခကို) ပယ်စွန့်ကုန်၏။ (ယင်းမက္ခကို) ပယ်စွန့်သောကြောင့် ဤလောကသို့ တရံတခါမျှ မလာရောက်ကုန်”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
ဤအနက်သဘောကိုလည်း မြတ်စွာဘုရား ဟောအပ်၏ဟု အကျွန်န်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်။
၆။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်န်ုပ်ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ တခုသောတရားကို ပယ်ကြကုန်လော့၊ သင်တို့အနာဂါမ်ဖြစ်ရေးအတွက် ငါဘုရားတာဝန်ယူ၏။ တခုသောတရားဟူသည် အဘယ်နည်း? ရဟန်းတို့ ထောင်လွှားမှု ‘မာန’ဟူသောတခုသောတရားကို ပယ်ကြကုန်လော့၊ သင်တို့အနာဂါမ်ဖြစ်ရေးအတွက် ငါဘုရားတာဝန်ယူ၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို
”အကြင်မာနဖြင့် ယစ်သူ သတ္တဝါတို့သည် မကောင်းသော လားရာ ‘ဂတိ’သို့ လားရောက်ကြရကုန်၏။ ထိုမာနကို ကောင်းစွာသိ၍ (ခန္ဓာငါးပါးတို့ကို) အနိစ္စ စသော အခြင်းအရာတို့ဖြင့် ရှုသူတို့သည် (ထိုမာနကို) ပယ်စွန့်ကုန်၏။ (ယင်းမာနကို) ပယ်စွန့်သောကြောင့် ဤလောကသို့ တစ်ရံတစ်ခါမျှမလာရောက်ကုန်”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၇။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ အလုံးစုံ တေဘုမ္မကတရားကို ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် မသိသူ ပိုင်းခြား၍ မသိသူ ထိုပိုင်းခြားအပ်သောတရား၌ စိတ်ကို တပ်စွန်းမှုကင်းအောင်မပြုနိုင်သူ ကိလေသာဝဋ်ကို မပယ်စွန့်နိုင်သူသည် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှါ မထိုက်၊ ရဟန်းတို့ အလုံးစုံ တေဘုမ္မကတရားကို ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိသူ့ပိုင်းခြား၍ သိသူ ထိုပိုင်းခြားအပ်သောတရား၌ စိတ်ကို တပ်စွန်းမှုကင်းအောင် ပြုနိုင်သူကိလေသာဝဋ်ကို ပယ်စွန့်နိုင်သူသည် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှါ ထိုက်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”အကြင်သူသည် အလုံးစုံ တေဘုမ္မကတရားကို အလုံးစုံ အဖို့အားဖြင့် သိသောကြောင့် အလုံးစုံသော သက္ကာယတရားတို့၌ မတပ်မက်၊ ထိုသူသည် အလုံးစုံ တေဘုမ္မကတရားကို ပိုင်းခြားသိ၍ဆင်းရဲအားလုံးကို မုချ လွန်မြောက်နိုင်၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၈။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ မာနကို ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် မသိသူ ပိုင်းခြား၍ မသိသူ ထိုမာနတရား၌ စိတ်ကို တပ်စွန်းမှုကင်းအောင်မပြုနိုင်သူ ကိလေသာဝဋ်ကို မပယ်စွန့်နိုင်သူသည် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှါ မထိုက်၊ ရဟန်းတို့မာနကို ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိသူ ပိုင်းခြား၍ သိသူ ထိုမာနတရား၌ စိတ်ကို တပ်စွန်းမှု ကင်းအောင်ပြုနိုင်သူ ကိလေသာဝဋ်ကို ပယ်စွန့်နိုင်သူသည် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှါ ထိုက်၏။ ဤအနက် သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”ဤသတ္တဝါတို့သည် မာနနှင့် ပြည့်စုံကုန်၏။ မာနဖြင့် အထုံးအဖွဲ့ခံရသူတို့သည် ဘဝ၌ မွေ့လျော်ကုန်၏။ မာနကို ပိုင်းခြား၍ မသိသူတို့သည် တစ်ဖန် ဘဝသစ်သို့ လာရောက်ကြရကုန်၏။
အကြင်သူတို့သည် မာနကို ပယ်သောကြောင့် မာနကုန်ခန်းရာ နိဗ္ဗာန်၌ (ကိလေသာမှ) လွတ်မြောက်ကုန်၏။ ထိုသူတို့သည် မာနထုံးဖွဲ့ခြင်းကို လွှမ်းမိုးနိုင်ကုန်သောကြောင့် ဆင်းရဲအားလုံးကို လွန်မြောက်ကုန်၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၉။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ လောဘကို ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် မသိသူ ပိုင်းခြား၍ မသိသူ ထိုတရား၌ စိတ်ကို တပ်စွန်းမှုကင်းအောင်မပြုနိုင်သူ ကိလေသာဝဋ်ကို မပယ်စွန့်နိုင်သူသည် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှါ မထိုက်၊ ရဟန်းတို့လောဘကို ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိသူ ပိုင်းခြား၍ သိသူ ထိုတရား၌ စိတ်ကို တပ်စွန်းမှုကင်းအောင်ပြုနိုင်သူ ကိလေသာဝဋ်ကို ပယ်စွန့်နိုင်သူသည် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှါ ထိုက်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို -”အကြင်လောဘဖြင့် တပ်မက်သူ သတ္တဝါတို့သည် မကောင်းသော လားရာ ‘ဂတိ’သို့ လားရောက်ကြရကုန်၏။ ထိုလောဘကို ကောင်းစွာသိ၍ (ခန္ဓာငါးပါးတို့ကို) အနိစ္စ စသော အခြင်းအရာတို့ဖြင့် ရှုသူတို့သည် (ထိုလောဘကို) ပယ်စွန့်ကုန်၏။ (ယင်းလောဘကို) ပယ်စွန့်သောကြောင့် ဤလောကသို့ တစ်ရံတစ်ခါမျှ မလာရောက်ကုန်”ဟု ဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၁ဝ။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ ဒေါသကို ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် မသိသူ ပိုင်းခြား၍ မသိသူ ထိုတရား၌ စိတ်ကို တပ်စွန်းမှုကင်းအောင်မပြုနိုင်သူ ကိလေသာဝဋ်ကို မပယ်စွန့်နိုင်သူသည် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှါ မထိုက်၊ ရဟန်းတို့ဒေါသကို ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိသူ ပိုင်းခြား၍ သိသူ ထိုတရား၌ စိတ်ကို တပ်စွန်းမှုကင်းအောင်ပြုနိုင်သူ ကိလေသာဝဋ်ကို ပယ်စွန့်နိုင်သူသည် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှါ ထိုက်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို -”အကြင်ဒေါသဖြင့် ဖျက်ဆီးခံရသူ သတ္တဝါတို့သည် မကောင်းသော လားရာ ‘ဂတိ’သို့ လားရောက်ကြရကုန်၏။ ထိုဒေါသကို ကောင်းစွာသိ၍ (ခန္ဓာငါးပါးတို့ကို) အနိစ္စစသော အခြင်းအရာတို့ဖြင့် ရှုသူတို့သည် (ထိုဒေါသကို) ပယ်စွန့်ကုန်၏။ (ယင်းဒေါသကို) ပယ်စွန့်သောကြောင့် ဤလောကသို့ တစ်ရံတစ်ခါမျှ မလာရောက်ကုန်”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
ရှေးဦးစွာသော ပါဋိဘောဂဝဂ် ပြီး၏။
၁၁။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ မောဟကို ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် မသိသူ ပိုင်းခြား၍ မသိသူ ထိုတရား၌ စိတ်ကို တပ်စွန်းမှုကင်းအောင်မပြုနိုင်သူ ကိလေသာဝဋ်ကို မပယ်စွန့်နိုင်သူသည် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှါ မထိုက်၊ ရဟန်းတို့မောဟကို ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိသူ ပိုင်းခြား၍ သိသူ ထိုတရား၌ စိတ်ကို တပ်စွန်းမှုကင်းအောင်ပြုနိုင်သူ ကိလေသာဝဋ်ကို ပယ်စွန့်နိုင်သူသည် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှါ ထိုက်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”အကြင်မောဟဖြင့် တွေဝေသူ သတ္တဝါတို့သည် မကောင်းသော လားရာ ‘ဂတိ’သို့ လားရောက်ကြရကုန်၏။ ထိုမောဟကို ကောင်းစွာသိ၍ (ခန္ဓာငါးပါးတို့ကို) အနိစ္စ စသော အခြင်းအရာတို့ဖြင့် ရှုသူတို့သည် (ထိုမောဟကို) ပယ်စွန့်ကုန်၏။ (ယင်း မောဟကို) ပယ်စွန့်သောကြောင့် ဤလောကသို့ တစ်ရံတစ်ခါမျှ မလာရောက်ကုန်”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၁၂။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ အမျက်ထွက်မှု ‘ကောဓ’ကို ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် မသိသူ ပိုင်းခြား၍ မသိသူ ထိုတရား၌ စိတ်ကို တပ်စွန်းမှု ကင်းအောင်မပြုနိုင်သူ ကိလေသာဝဋ်ကို မပယ်စွန့်နိုင်သူသည် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှါမထိုက်၊ ရဟန်းတို့ အမျက်ထွက်မှု ‘ကောဓ’ကို ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိသူ ပိုင်းခြား၍ သိသူ ထိုတရား၌ စိတ်ကို တပ်စွန်းမှုကင်းအောင် ပြုနိုင်သူ ကိလေသာဝဋ်ကို ပယ်စွန့်နိုင်သူသည် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှါထိုက်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို -”အကြင်ကောဓတရားဖြင့် အမျက်ထွက်သူတို့သည် မကောင်းသော လားရာ ‘ဂတိ’သို့ လားရောက်ကြရကုန်၏။ ထိုကောဓကို ကောင်းစွာသိ၍ (ခန္ဓာငါးပါးတို့ကို) အနိစ္စ စသော အခြင်းအရာတို့ဖြင့် ရှုသူတို့သည် (ထိုကောဓကို) ပယ်စွန့်ကုန်၏။ (ယင်း ကောဓကို) ပယ်စွန့်သောကြောင့် ဤလောကသို့ တစ်ရံတစ်ခါမျှ မလာရောက်ကုန်”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၁၃။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ သူ့ကျေးဇူးကို ချေဖျက်မှု ‘မက္ခ’ကို ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် မသိသူ ပိုင်းခြား၍ မသိသူထိုတရား၌ စိတ်ကို တပ်စွန်းမှုကင်းအောင်မပြုနိုင်သူ ကိလေသာဝဋ်ကို မပယ်စွန့်နိုင်သူသည် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှါ မထိုက်၊ ရဟန်းတို့ သူ့ကျေးဇူးကို ချေဖျက်မှု ‘မက္ခ’ကို ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိသူ ပိုင်းခြား၍သိသူ ထိုတရား၌ စိတ်ကို တပ်စွန်းမှုကင်းအောင် ပြုနိုင်သူ ကိလေသာဝဋ်ကို ပယ်စွန့်နိုင်သူသည် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှါ ထိုက်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”အကြင်မက္ခဖြင့် သူ့ကျေးဇူးကို ချေဖျက်သူတို့သည် မကောင်းသော လားရာ ‘ဂတိ’သို့ လားရောက်ကြရကုန်၏။ ထိုမက္ခတရားကို ကောင်းစွာသိ၍ (ခန္ဓာငါးပါးတို့ကို) အနိစ္စစသော အခြင်းအရာတို့ဖြင့် ရှုသူတို့သည် (ထိုမက္ခကို) ပယ်စွန့်ကုန်၏။ (ယင်းမက္ခတရားကို) ပယ်စွန့်သောကြောင့် ဤလောကသို့ တစ်ရံတစ်ခါမျှ မလာရောက်ကုန်”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၁၄။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ အကြင်နီဝရဏဖြင့် တားမြစ်ပိတ်ပင်ခံရသော သတ္တဝါတို့သည် ရှည်ကြာစွာသော နေ့ညဉ့်ပတ်လုံး သံသရာ၌ ပြေးသွားကျင်လည်ကြရကုန်၏။ ထိုနီဝရဏကား အဝိဇ္ဇာနီဝရဏပေတည်း။ ရဟန်းတို့အဝိဇ္ဇာ နီဝရဏမှတစ်ပါး သံသရာ၌ ပြေးသွားကျင်လည်စေတတ်သော အခြားနီဝရဏတစ်ခုကိုမျှလည်းငါဘုရား မြင်တော်မမူ၊မှန်၏ ရဟန်းတို့ အဝိဇ္ဇာနီဝရဏဖြင့် တားမြစ်ပိတ်ပင်ခံရသော သတ္တဝါတို့သည် ရှည်ကြာစွာသော နေ့ညဉ့်ပတ်လုံး သံသရာ၌ ပြေးသွားကျင်လည်ကြရကုန်၏။ ဤအနက် သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို -”အကြင် မောဟဟူသော အဝိဇ္ဇာနီဝရဏဖြင့် တားမြစ်ပိတ်ပင်ခံရသော သတ္တဝါတို့သည် ရှည်ကြာစွာသော နေ့ညဉ့်ပတ်လုံး (သံသရာ၌) ကျင်လည်ကြရကုန်၏။ ထိုမောဟဟူသော အဝိဇ္ဇာနီဝရဏကဲ့သို့ ပိတ်ပင်တတ်သော အခြားနီဝရဏ တစ်ခုမျှလည်း မရှိ။
အကြင် အရိယာသာဝကတို့သည် မောဟကို ပယ်စွန့်၍ အမိုက်တိုက်အစုကို ဖောက်ခွဲကုန်၏။ ထိုအရိယာသာဝကတို့သည် သံသရာ၌ တစ်ဖန် မကျင်လည်ရကုန်။ ထိုအရိယာသာဝကတို့အား (သံသရာ၌ တစ်ဖန် ကျင်လည်ရန်) အကြောင်း တရား မရှိတော့ပေ”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၁၅။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ အကြင်သံယောဇဉ်ဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခံရသော သတ္တဝါတို့သည် ရှည်ကြာစွာသော နေ့ညဉ့်ပတ်လုံး (သံသရာ၌) ပြေးသွားကျင်လည်ကြရကုန်၏။ ထိုသံယောဇဉ်ကား တဏှာသံယောဇဉ်ပေတည်း။ ရဟန်းတို့ တဏှာသံယောဇဉ်မှတစ်ပါး သံသရာ၌ ပြေးသွားကျင်လည်စေတတ်သော အခြားသံယောဇဉ်တစ်ခုကိုမျှလည်း ငါဘုရား မြင်တော်မမူ၊မှန်၏ ရဟန်းတို့ တဏှာသံယောဇဉ်ဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခံရသော သတ္တဝါတို့သည် ရှည်ကြာစွာသော နေ့ညဉ့်ပတ်လုံး (သံသရာ၌) ပြေးသွားကျင်လည်ကြရကုန်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”တဏှာလျှင် အဖော်ရှိသော ယောက်ျားသည် ရှည်ကြာစွာသော ကာလပတ်လုံး ကျင်လည်ရသည်ဖြစ်၍လူ့ဘဝ, တစ်ပါးသော ဘဝဟူသော သံသရာကို မလွန် မြောက်နိုင်။
သတိရှိသော ရဟန်းသည် ဆင်းရဲ၏အကြောင်းဖြစ်သော ထိုတဏှာကို အပြစ်အားဖြင့် သိ၍တဏှာကင်းသောကြောင့် နောင်တစ်ဖန် ပဋိသန္ဓေကို မယူတော့ဘဲ (သံသရာမှ) ထွက်မြောက်နိုင်ရာ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၁၆။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ ဤယောနိသောမနသိကာရသည် အရဟတ္တဖိုလ်သို့ မရောက်သေးသော အတုမရှိ မြတ်သော အရဟတ္တဖိုလ်ကို တောင့်တလျက် နေသော သေက္ခရဟန်း၏ အတွင်းအဇ္ဈတ္တဖြစ်သော အကြောင်းအင်္ဂါတည်းဟု နှလုံးပြု၍ ကျေးဇူးများသကဲ့သို့ ဤအတူ ယောနိသောမနသိကာရမှတစ်ပါး အခြားကျေးဇူးများသောတရားတစ်ခုကိုမျှလည်း ငါဘုရား မြင်တော်မမူ၊ ရဟန်းတို့ ယောနိသောမနသိကာရရှိသော ရဟန်းသည် အကုသိုလ်ကို ပယ်စွန့်၍ ကုသိုလ်ကို ပွါးစေ၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”ယောနိသောမနသိကာရသည် သေက္ခရဟန်းအား မြတ်သော အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်ရန်ကျေးဇူးများသကဲ့သို့၊ ဤအတူ ယောနိသောမနသိကာရမှတစ်ပါး အခြား ကျေးဇူးများသောတရားမရှိ၊ အသင့်အားဖြင့်အားထုတ်သော ရဟန်းသည် ဆင်းရဲကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်နိုင်ရာ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့်ဆိုအပ်၏။
၁၇။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ ဤမိတ်ဆွေကောင်းရှိမှုသည် အရဟတ္တဖိုလ်သို့ မရောက်သေးသော အတုမရှိ မြတ်သော အရဟတ္တဖိုလ်ကို တောင့်တလျက် နေသော သေက္ခရဟန်း၏ အပြင်ဗာဟိရဖြစ်သော အကြောင်းအင်္ဂါတည်းဟု နှလုံးပြု၍ ကျေးဇူးများသကဲ့သို့ ဤအတူ မိတ်ဆွေကောင်းရှိမှုမှတစ်ပါး အခြားကျေးဇူးများသောတရားတစ်ခုကိုမျှလည်း ငါဘုရား မြင်တော်မမူ၊ ရဟန်းတို့ မိတ်ဆွေကောင်းရှိသော ရဟန်းသည် အကုသိုလ်ကို ပယ်စွန့်၍ ကုသိုလ်ကို ပွါးစေနိုင်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”မိတ်ဆွေကောင်းရှိသူ အကြင်ရဟန်းသည် တုပ်ဝပ်ခြင်း ရှိ၏။ ရိုသေခြင်း ရှိ၏။ မိတ်ဆွေကောင်းတို့၏စကားကို လိုက်နာပြုကျင့်၏။ ပညာအဆင်အခြင် ရှိ၏။ သတိ အမြဲပြု၏။ (ထိုရဟန်းသည် ) ဝိပဿနာအစဉ်အားဖြင့် သံယောဇဉ်အားလုံးတို့၏ကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်နိုင်၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့်ဆိုအပ်၏။
၁၈။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ တစ်ခုသောတရားသည် လောက၌ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ရှိသော် လူအများစီးပွါးမဲ့ရန် လူအများမချမ်းသာရန် လူအများအကျိုးမဲ့ရန် နတ်လူတို့ အကျိုးစီးပွါးမရှိရန် ဆင်းရဲရန်သာဖြစ်၏။ တစ်ခုသောတရားဟူသည် အဘယ်နည်း? သံဃာကွဲပြားမှုတည်း။ ရဟန်းတို့ သံဃာကွဲပြားသည်ရှိသော်သံဃာကွဲပြားခြင်းကြောင့် အချင်းချင်း ငြင်းခုံမှုတို့သည်လည်း ဖြစ်ကုန်၏။ အချင်းချင်း ခြိမ်းခြောက်မှုတို့သည်လည်း ဖြစ်ကုန်၏။ အချင်းချင်း ရှုတ်ချပစ်ပယ်မှုတို့သည်လည်း ဖြစ်ကုန်၏။ အချင်းချင်း နှင်ထုတ်စွန့်လွှတ်မှုတို့သည်လည်း ဖြစ်ကုန်၏။ ထိုသံဃာကွဲပြားရာ၌ မကြည်ညိုသေးသောသူတို့လည်း မကြည်ညိုကုန်။ ကြည်ညိုပြီးသောအချို့သူတို့လည်း အကြည်ညိုပျက်ကုန်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”သံဃာကို သင်းခွဲသူသည် အပါယ်၌ ဖြစ်ထိုက်၏။ (အဝီစိ) ငရဲ၌ ဖြစ်ရ၏။ (အန္တရ) ကပ်ပတ်လုံးတည်၏။ သံဃာကွဲပြားမှု၌ မွေ့လျော်၍ မတရားမှု၌ တည်သူသည် ယောဂလေးဖြာကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်မှဆုတ်ယုတ်၏။ ညီညွတ်သော သံဃာကို သင်းခွဲသောကြောင့် (အန္တရ) ကပ်ပတ်လုံး ငရဲ၌ ကျက်ရ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၁၉။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို့ ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ တစ်ခုသောတရားသည် လောက၌ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ရှိသော် လူအများ အကျိုးစီးပွါး ရှိရန်လူအများ ချမ်းသာရန် လူအများ အကျိုးရှိရန် နတ်လူတို့ အကျိုးစီးပွါးရှိရန် ချမ်းသာရန်သာ ဖြစ်၏။ တစ်ခုသောတရားဟူသည် အဘယ်နည်း? သံဃာညီညွတ်မှုတည်း။ ရဟန်းတို့ သံဃာညီညွတ်သည်ရှိသော်သံဃာညီညွတ်ခြင်းကြောင့် အချင်းချင်း ငြင်းခုံမှုတို့သည်လည်း မဖြစ်ကုန်။ အချင်းချင်းခြိမ်းခြောက်မှုတို့သည်လည်း မဖြစ်ကုန်။ အချင်းချင်း ရှုတ်ချပစ်ပယ်မှုတို့သည်လည်း မဖြစ်ကုန်။ အချင်းချင်း နှင်ထုတ်စွန့်လွှတ်မှုတို့သည်လည်း မဖြစ်ကုန်။ ထိုသံဃာညီညွတ်ရာ၌ မကြည်ညိုသေးသောသူတို့သည်လည်း ကြည်ညိုကုန်၏။ ကြည်ညိုပြီးသူတို့သည်လည်း တိုး၍ ကြည်ညိုကုန်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”သံဃာညီညွတ်မှုသည်လည်းကောင်း၊ ညီညွတ်သူတို့အား ချီးမြှောက်မှုသည်လည်းကောင်း ချမ်းသာ၏။ ညီညွတ်မှု၌ မွေ့လျော်၍ တရား၌ တည်သောသူသည် ယောဂလေးဖြာကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်မှ မဆုတ်ယုတ်နိုင်၊ သံဃာညီညွတ်မှုကို ပြုသောကြောင့် အာယုကပ်ပတ်လုံး နတ်ပြည်၌ မွေ့လျော်ရ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့်ဆိုအပ်၏။
၂ဝ။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ ဒေါသစိတ်ရှိသူ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဤသို့ (ငါဘုရား၏) စိတ်ဖြင့် ထိုသူ၏စိတ်ကို ပိုင်းခြား၍ သိ၏ ”ဤဒေါသစိတ်ရှိသောအခါ၌ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် သေခဲ့မူ ဝန်ထုပ်ကို ဆောင်ယူ၍ချထားသကဲ့သို့ ဤအတူ ငရဲ၌ ကျရလေ၏။ ဤသို့ ငရဲကျရခြင်းသည် အဘယ့်ကြောင့် နည်း? ရဟန်းတို့ ထိုသူ၏ စိတ်သည် ဒေါသဖြင့် ဖျက်ဆီးအပ်သောကြောင့် တည်း”၊ ရဟန်းတို့ဒေါသစိတ်ရှိခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဤလောက၌ အချို့သတ္တဝါတို့သည် ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍သေသည်မှနောက်၌ ချမ်းသာ ကင်းသော မကောင်းသော လားရာ ပျက်စီးကျရောက်ရာဖြစ်သော ငရဲ၌ ဖြစ်ကြရကုန်၏။ ဤအနက် သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို -”မြတ်စွာဘုရားသည် ဤလောက၌ ဒေါသစိတ်ရှိသူ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို သိ၍ ရဟန်းတို့အားဤဆိုလတ္တံ့သော အနက်သဘောကို ဟောကြားတော်မူ၏။
ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် ဒေါသစိတ်ရှိသောအချိန်အခါ၌ သေခဲ့မူ ဝန်ထုပ်ကို ဆောင်ယူ၍ ချထားသကဲ့သို့ ဤအတူ ထိုသို့ သဘောရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ငရဲ၌ ဖြစ်ရာ၏။ (အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော်) ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်ကို ဒေါသသည် ဖျက်ဆီးအပ်သောကြောင့် တည်း။
မှန်၏။ သတ္တဝါတို့သည် ဒေါသဖျက်ဆီးအပ်သော စိတ်ဟူသော အကြောင်းကြောင့် မကောင်းသော လားရာ ဒုဂ္ဂတိဘဝသို့ လားရောက်ကြရကုန်၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၂၁။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ စိတ်ကြည်လင်သူ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဤသို့ (ငါဘုရား၏စိတ်ဖြင့်) ထိုသူ၏စိတ်ကို ပိုင်းခြား၍သိ၏ ”ဤစိတ်ကြည်လင်သောအခါ၌ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် သေခဲ့မူ ဝန်ထုပ်ကို ဆောင်ယူ၍ချထားသကဲ့သို့ ဤအတူ နတ်ပြည်၌ ဖြစ်ရ၏”။ ယင်းသို့ နတ်ပြည်၌ ဖြစ်ရခြင်းသည် အဘယ့်ကြောင့် နည်း? ရဟန်းတို့ ထိုသူ၏ စိတ်သည် ကြည်လင်သောကြောင့် တည်း။ ရဟန်းတို့ စိတ်ကြည်လင်ခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဤလောက၌ အချို့သော သတ္တဝါတို့သည် ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍သေသည်မှနောက်၌ ကောင်းသော လားရာ နတ်ပြည်၌ ဖြစ်ကြရကုန်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို -”မြတ်စွာဘုရားသည် ဤလောက၌ စိတ်ကြည်လင်သူ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို သိ၍ ရဟန်းတို့အားဤဆိုလတ္တံ့သော အနက်သဘောကို ဟောကြားတော်မူ၏။
ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် စိတ်ကြည်လင်သောအခါ၌ သေခဲ့မူ ဝန်ထုပ်ကို ဆောင်ယူ၍ ချထားသကဲ့သို့၊ ဤအတူထိုသို့ သဘောရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် သုဂတိဘဝ၌ ဖြစ်ရ၏။ (အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော်) ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်သည် ကြည်လင်သောကြောင့် တည်း။
မှန်၏။ သတ္တဝါတို့သည် စိတ်ကြည်လင်ခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ကောင်းသော လားရာသုဂတိဘဝသို့ လားရောက်ကြရကုန်၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၂၂။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို မကြောက်ကြကုန်လင့်၊ ရဟန်းတို့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဟူသော ဤအမည်သည် ထိုအလိုရှိအပ် နှစ်သက်အပ် ချစ်ခင်အပ် မြတ်နိုးအပ်သော ချမ်းသာသုခ၏အမည်ပေတည်း။ ရဟန်းတို့ ငါဘုရားသည် ရှည်ကြာစွာသော နေ့ညဉ့်ပတ်လုံး မိမိပြုအပ်သော ကုသိုလ်တို့၏ အလိုရှိအပ် နှစ်သက်အပ် ချစ်ခင်အပ် မြတ်နိုးအပ်သော အကျိုးကို ခံစားဖူးသည်ကို မျက်မှောက်ထင်ထင် သိမြင်တော်မူ၏။ ခုနစ်နှစ်တို့ပတ်လုံး မေတ္တာစိတ်ကို ပွါး၍ ခုနစ်ကမ္ဘာတို့ပတ်လုံး ဤကာမဘုံသို့ မလာရောက်ရတော့ပေ၊ ရဟန်းတို့ ကမ္ဘာပျက်သောအခါ၌ အာဘဿရဘုံသို့ ရောက်နေရ၏။ ကမ္ဘာတည်မိသောအခါ၌ သတ္တဝါကင်းသော ဗြဟ္မာ့ဘုံ၌ ဖြစ်လာ၏။
ရဟန်းတို့ ထိုဗြဟ္မာ့ဘုံ၌ ဗြဟ္မာ ဖြစ်၏။ မဟာဗြဟ္မာ ဖြစ်၏။ လွှမ်းမိုးနိုင်သူ ဖြစ်၏။ မည်သူကမျှမလွှမ်းမိုးနိုင်သူ ဖြစ်၏။ စင်စစ် (အလုံးစုံကို) မြင်သူ ဖြစ်၏။ အလိုအတိုင်း ဖြစ်စေနိုင်သူ ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ ငါဘုရားသည် သုံးဆယ့်ခြောက်ကြိမ်တိုင်တိုင် နတ်တို့အရှင် သိကြားမင်း ဖြစ်ဖူး၏။ အကြိမ်ရာပေါင်း များစွာ သမုဒ္ဒရာလေးစင်း အပိုင်းအခြားရှိသည့် လေးကျွန်းလုံးကို အစိုးရသော ရန်သူအပေါင်းတို့ကို အောင်သောတိုင်းနိုင်ငံ တည်ငြိမ်စေသော ရတနာခုနစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသောတရားစောင့်သောတရားနှင့် အညီ မင်းပြုသော စကြဝတေးမင်း ဖြစ်ဖူး၏။ ပဒေသရာဇ်မင်းအဖြစ်မှာကား အဘယ်ဆိုဖွယ်ရှိရာအံ့နည်း။
ရဟန်းတို့ ”ယခုအခါ ငါဘုရား၏ ဤသို့ တန်ခိုးကြီးခြင်း ဤသို့ အာနုဘော်ကြီးခြင်းဟူသော ဤအကျို့းတရားသည် အဘယ်ကံ၏ အကျိုးနည်း? အဘယ်ကံ၏ ဝိပါက်နည်း”ဟု ဤသို့ ငါဘုရားအားအကြံဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ ”ယခုအခါ ငါဘုရား၏ ဤသို့ တန်ခိုးကြီးခြင်း ဤသို့ အာနုဘော်ကြီးခြင်းဟူသော ဤအကျိုးတရားသည် ပေးကမ်းလှူဒါန်းမှု ဣနြေ္ဒကို ဆုံးမမှုကိုယ်နှုတ်ကို စောင့်စည်းမှုဟူသော ဤကံသုံးပါးတို့၏ အကျိုးတည်း။ ဤကံသုံးပါး၏ ဝိပါက်တည်း”ဟု ဤသို့ ငါဘုရားအား အကြံဖြစ်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”ထိုသူသည် ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသာလျှင် ကျင့်ရာ၏။ နောင်အခါ၌ မြတ်သော ချမ်းသာကျိုးရှိသော ဒါနကိုလည်းကောင်း၊ ကောင်းသောအကျင့်ကိုလည်းကောင်း၊ မေတ္တာစိတ်ကိုလည်းကောင်း ပွါးများရာ၏။
ပညာရှိသည် သုခလျှင် အာနိသင်ရှိကုန်သော ဤတရားသုံးပါးတို့ကို ပွါးများ၍ကြောင့်ကြမှု ‘ဗျာပါဒ’ ကင်းသော ချမ်းသာသော လောကသို့ ကပ်ရောက်ရ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့်ဆိုအပ်၏။
၂၃။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုအပ်သောတစ်ခုသောတရားသည် မျက်မှောက်အကျိုးတမလွန် အကျိုးဟူသော အကျိုးနှစ်ပါးတို့ကို ကောင်းစွာယူ၍ တည်၏။ တစ်ခုသောတရားဟူသည်အဘယ်နည်း? ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌ မမေ့မလျော့မှု ‘အပ္ပမာဒ’ တရားပင်တည်း။ ရဟန်းတို့ ပွါးများအပ်ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုအပ်သော ဤတစ်ခုသောတရားသည် မျက်မှောက်အကျိုး တမလွန်အကျိုးဟူသော အကျိုးနှစ်ပါးတို့ကို ကောင်းစွာ ယူ၍ တည်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”ပညာရှိတို့သည် ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌ မမေ့မလျော့မှုကို ချီးမွမ်းကြကုန်၏။ ပညာရှိသည်မမေ့မလျော့သည်ဖြစ်၍ အကျိုးနှစ်ပါးတို့ကို ယူနိုင်၏။
မျက်မှောက်အကျိုး တမလွန်အကျိုးဟူသော အကျိုးနှစ်ပါးတို့ကို ရခြင်းကြောင့် ပညာရှိကို ပဏ္ဍိတဟူ၍ဆိုအပ်၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၂၄။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
စုဆောင်းထားသူလည်း ရှိခဲ့မူ စုဆောင်းထားတိုင်းလည်း မပျက်စီးခဲ့မူ တစ်ကမ္ဘာပတ်လုံး ပြေးသွားကျင်လည်သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်၏ ကြီးစွာသော အရိုးပေါင်း အရိုးပုံ အရိုးစုသည် ဤဝေပုလ္လတောင်ကြီးမျှပင် ရှိသည် ဖြစ်ရာ၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”တစ်ကမ္ဘာပတ်လုံး (ကျင်လည်ပြေးသွားရသော) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်၏ အရိုးစုသည် တောင်မျှလောက်အစုအပုံရှိသည် ဖြစ်ရာ၏ဟု မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။
ထိုတောင်ကို မူကား မဂဓတိုင်းတို့၏ ဂိရိဗ္ဗဇမည်သော (ရာဇဂြိုဟ်) မြို့ ဝယ် ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၏မြောက်ဘက်၌ တည်သော ကြီးသော ဝေပုလ္လတောင်ဟု ဆိုအပ်၏။
ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းကောင်း ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း သမုဒယသစ္စာကိုလည်းကောင်း၊ ဒုက္ခကို လွန်မြောက်ရာ’နိရောဓ’သစ္စာကိုလည်းကောင်း၊ ဒုက္ခ၏ချုပ်ငြိမ်းရာ (နိဗ္ဗာန်သို့) ရောက်ကြောင်းဖြစ်သော မြတ်သော အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော မဂ္ဂသစ္စာဟု ဆိုအပ်သော အရိယသစ္စာတို့ကိုလည်းကောင်း၊ အကြင်အခါ၌ ကောင်းသော ပညာဖြင့် မြင်၏။ ထိုအခါ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် (ကာမဘုံ၌) ခုနစ်ကြိမ် အလွန်ပြေးသွား၍သံယောဇဉ်အားလုံးတို့၏ကုန်ခြင်းကြောင့် ဒုက္ခ၏အဆုံးကို ပြုလေတော့၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၂၅။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ တစ်ခုသောတရားကို လွန်ကျူး၍တည်သော ပုဂ္ဂိုလ်အား တစ်စုံတစ်ရာသော မကောင်းမှုကို မပြုလုပ်ဟူ၍ ငါဘုရား မဟော၊ တစ်ခုသောတရားဟူသည် အဘယ်နည်း? ရဟန်းတို့ ယင်းတစ်ခုသောတရားဟူသည် သိလျက် ချွတ်ယွင်းသော စကားကို ပြောဆိုမှု ‘မုသာဝါဒ’ တရားပင်တည်း။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”တမလွန်လောကကို စွန့်လွှတ်ပြီးသောတစ်ခုသောတရားကို လွန်ကျူးသော မုသားပြောဆိုလေ့ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်အား မည်သည့် မကောင်းမှုကိုမျှ မပြုနိုင်ဟူ၍ မရှိတော့ပေ”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၂၆။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ သတ္တဝါတို့သည် လှူဒါန်းဝေဖန်ခြင်း၏ အကျိုးကို ငါဘုရားသိသကဲ့သို့ သိကြကုန်မူမပေးလှူဘဲ မစားကုန်ရာ၊ ဝန်တိုမှုနှင့် ငြူစူမှုစသော အကုသိုလ်အညစ်အကြေးသည် ထိုသူ၏စိတ်ကို သိမ်းကျုံးလွှမ်းမိုး၍ မတည်နိုင်ရာ၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိကုန်မူ ထိုသူတို့သည် နောက်ဆုံးဖြစ်သော ထမင်းလုတ်ထမင်းဆုပ်မှသော်လည်း မခွဲခြမ်း မဝေဖန်မူ၍ မစားကုန်ရာ။ ရဟန်းတို့ သတ္တဝါတို့သည် လှူဒါန်းဝေဖန်ခြင်း၏ အကျိုးကို ငါဘုရားသိသကဲ့သို့ မသိကုန်သောကြောင့် သာ မပေးလှူဘဲ စားကြကုန်၏။ ဝန်တိုမှုနှင့် ငြူစူမှုစသော အကုသိုလ်အညစ်အကြေးသည် ထိုသူ၏စိတ်ကို သိမ်းကျုံးလွှမ်းမိုး၍ တည်လေ၏ဟု ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”ခွဲခြမ်းဝေဖန်မှုသည် ဤသို့ ကြီးသော အကျိုးရှိ၏ဟု ခွဲခြမ်းဝေဖန်မှု၏ အကျိုးကို မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူသည့်အတိုင်း အကယ်၍ သိကြကုန်မူ ဝန်တိုမှုနှင့် ငြူစူမှုစသော အကုသိုလ်အညစ်အကြေးကို ပယ်ဖျောက်၍ အထူးကြည်လင်သော စိတ်ဖြင့် အကြင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ ပေးလှူသော အလှူသည်အကျိုးကြီး၏။ ထိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ လျောက်ပတ်သောအခါ ပေးလှူကုန်ရာ၏။
လူများစွာအား ထမင်းကိုလည်းကောင်း၊ မြတ်သော အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ မြတ်သော အလှူကိုလည်းကောင်းပေးလှူသောကြောင့် အလှူဒါယကာတို့သည် ဤလူ၏အဖြစ်မှ စုတေသည်ရှိသော် နတ်ပြည်သို့ လားရောက်ကြရကုန်၏။
နတ်ပြည်၌ ရောက်ကြကုန်သော ထိုသတ္တဝါတို့သည် ထိုနတ်ပြည်၌ အလိုရှိအပ်သော ကာမဂုဏ်တို့နှင့်ပြည့်စုံကုန်သည်ဖြစ်၍ ဝမ်းမြောက်ကြရကုန်၏။ ဝန်တိုမှု မရှိသူတို့သည် ခွဲခြမ်းဝေဖန်ခြင်းအကျိုးကို ခံစားကြရကုန်၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၂၇။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ ခန္ဓာဟူသော ဥပဓိအကျိုးရှိကုန်သော ပုညကိရိယဝတ္ထုဟူသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟူသမျှအားလုံးတို့သည် မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော စိတ်၏လွတ်မြောက်မှု (အပ္ပနာဈာန်) ၏ တစ်ဆယ့်ခြောက်စိတ်စိတ်၍ တစ်စိတ်မျှ မထိုက်တန်ကုန်။ မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော စိတ်၏လွတ်မြောက်မှု (အပ္ပနာဈာန်)သည်သာလျှင် ထိုပုညကိရိယဝတ္ထု ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို လွှမ်းမိုး၍တောက်ပြောင်လည်း တောက်ပြောင်၏။ ထွန်းပလည်း ထွန်းပ၏။ တင့်တယ်လည်း တင့်တယ်၏။
ရဟန်းတို့ ကြယ်တာရာတို့၏ အရောင်ဟူသမျှအားလုံးတို့သည် လရောင်၏ တစ်ဆယ့်ခြောက်စိတ်စိတ်၍ တစ်စိတ်ကိုမျှ မထိုက်တန်ကုန်။ လရောင်သည်သာလျှင် ထိုကြယ်တာရာအရောင်တို့ကို လွှမ်းမိုး၍ တောက်ပြောင်လည်း တောက်ပြောင် ထွန်းပလည်း ထွန်းပ တင့်တယ်လည်းတင့်တယ်သကဲ့သို့ ဤအတူ ခန္ဓာဟူသော ဥပဓိအကျိုးရှိကုန်သော ပုညကိရိယဝတ္ထု ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟူသမျှအားလုံးတို့သည် မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော စိတ်၏ လွတ်မြောက်မှု (အပ္ပနာဈာန်) ၏တစ်ဆယ့်ခြောက်စိတ် စိတ်၍ တစ်စိတ်ကိုမျှ မထိုက် တန်ကုန်။ မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော စိတ်၏လွတ်မြောက်မှု (အပ္ပနာဈာန်)သည်သာလျှင် ထိုပုညကိရိယဝတ္ထု ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို လွှမ်းမိုး၍တောက်ပြောင်လည်း တောက်ပြောင်၏။ ထွန်းပလည်း ထွန်းပ၏။ တင့်တယ်လည်း တင့်တယ်၏။
ရဟန်းတို့ မိုးဥတု၏ နောက်ဆုံးဖြစ်သောတန်ဆောင်မုန်းလ သရဒဥတု၌ ကောင်းကင်ဟင်းလင်း ဖြစ်၍မိုးတိမ်ကင်းလတ်သော် နေမင်းသည် ကောင်းကင်သို့ တက်လျက် ကောင်းကင်ရှိ အမိုက်တိုက်အားလုံးကို ပယ်ဖျောက်၍ တောက်ပြောင်လည်း တောက်ပြောင် ထွန်းပလည်း ထွန်းပ တင့်တယ်လည်း တင့်တယ်သကဲ့သို့ ဤအတူ ခန္ဓာဟူသော ဥပဓိအကျိုးရှိကုန်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပုညကိရိယဝတ္ထုဟူသမျှအားလုံးတို့သည် မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော စိတ်၏လွတ်မြောက်မှု (အပ္ပနာဈာန်) ၏ တစ်ဆယ့်ခြောက်စိတ်စိတ်၍ တစ်စိတ်ကိုမျှ မထိုက်တန်ကုန်။ မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော စိတ်၏လွတ်မြောက်မှု (အပ္ပနာဈာန်)သည်သာလျှင် ထိုပုညကိရိယဝတ္ထု ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို လွှမ်းမိုး၍ တောက်ပြောင်လည်းတောက်ပြောင်၏။ ထွန်းပလည်း ထွန်းပ၏။ တင့်တယ်လည်း တင့်တယ်၏။
ရဟန်းတို့ ညဉ့်၏မိုးသောက်ခါနီး၌ သော ကြာကြယ်သည် တောက်ပြောင်လည်း တောက်ပြောင်ထွန်းပလည်း ထွန်းပ တင့်တယ်လည်း တင့်တယ်သကဲ့သို့ ဤအတူသာလျှင် ခန္ဓာဟူသော ဥပဓိအကျိုး ရှိသော ပုညကိရိယဝတ္ထု ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟူသမျှအားလုံးတို့သည် မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော စိတ်၏ လွတ်မြောက်မှု (အပ္ပနာဈာန်) ၏ တစ်ဆယ့်ခြောက်စိတ် စိတ်၍ တစ်စိတ်ကိုမျှ မထိုက်တန်ကုန်။ မေတ္တာနှင့် ယှဉ်သော စိတ်၏ လွတ်မြောက်မှု (အပ္ပနာဈာန်)သည်သာလျှင် ထိုပုညကိရိယဝတ္ထု ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို လွှမ်းမိုး၍ တောက်ပြောင်လည်း တောက်ပြောင်၏။ ထွန်းပလည်း ထွန်းပ၏။ တင့်တယ်လည်း တင့်တယ်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို-
”အကြင်သူသည် အမြဲသတိပြုလျက် အတိုင်းအရှည် ပမာဏမရှိသော မေတ္တာ ဈာန်ကို ပွါးများ၏။ ခန္ဓာဟူသော ဥပဓိကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်ကို မြင်သော ထိုသူအား သံယောဇဉ်တို့သည် ခေါင်းပါးကုန်၏။
(ဗျာပါဒကြောင့် ) ပျက်စီးသော စိတ်မရှိသူသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်သော သတ္တဝါကိုသော်လည်းအကယ်၍ မေတ္တာပွါးများခဲ့မူ ထိုမေတ္တာပွါးများခြင်းကြောင့် လွန်ကဲသော ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိသူ ဖြစ်၏။ သတ္တဝါအားလုံးတို့ကို စိတ်ဖြင့် စောင့်ရှောက်သော စင်ကြယ်သော စိတ်ရှိသူသည် များစွာကောင်းမှုအစုကို ပြီးစေ၏။
အကြင်ရာဇိသယမည်ကုန်သောတရားစောင့်မင်းတို့သည် သတ္တဝါတို့ဖြင့် ပြည့် ကြပ်နေသော မြေပြင်အလုံးကို အောင်နိုင်၍ အခွန်ဆယ်ခိုင့်တစ်ခိုင် ယူခြင်း ‘သဿမေဓ’၊ စစ်သူကြီးတို့အားခြောက်လတစ်ကြိမ် ရိက္ခာပေးခြင်း ‘ပုရိသမေဓ’၊ သူဆင်းရဲတို့အား လက်မှတ် ရေးထိုးစေ၍အသပြာတစ်ထောင် နှစ်ထောင် အတိုး အပွါးမရှိ ထုတ်ချေးခြင်း ‘သမ္မာပါသ’၊ ချစ်သား ဦးရီးစသည့်သိမ်မွေ့သော စကားဖြင့် ချီးမြှောက်ခြင်း ‘ဝါဇပေယျ’၊ ဤသင်္ဂဟ တရားလေးပါးတို့ဖြင့်ချီးမြှောက်ပူဇော်ကုန်၍ အိမ်တို့၌ တံခါးအပိတ်မရှိသည်ကို ပြုကုန်လျက် လှည့်လည်ကုန်၏။
အလုံးစုံသော ကြယ်တာရာအပေါင်းတို့သည် လရောင်၏ တစ်ဆယ့်ခြောက်စိတ် စိတ်၍ တစ်စိတ်မျှမထိုက်တန်သကဲ့သို့ ထိုမင်းတို့၏ သဿမေဓစသော သင်္ဂဟ တရား လေးပါးတို့သည် ကောင်းစွာပွါးများအပ်သော မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော စိတ်၏ တစ်ဆယ့်ခြောက်စိတ် စိတ်၍တစ်စိတ်ကိုမျှလည်း မထိုက်တန်ကုန်။
သတ္တဝါအားလုံးတို့၌ မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော စိတ်အဖို့အစုရှိသော အကြင်သူသည် (တစ်စုံတစ်ယောက်ကို) ကိုယ်တိုင်လည်း မညှဉ်းဆဲ၊ မသတ်ပုတ်၊ အနိုင်အထက်ပြု၍လည်း အနိုင်မယူ၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း မဆုံးရှုံးစေ၊ ထိုသူအား တစ်စုံတစ်ရာသော အကြောင်းကြောင့် ဘေးရန်မဖြစ်နိုင်”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
ဧကကနိပါတ် မြန်မာပြန် ပြီး၏။